မြင့်မြတ် ဟာ ဖခင်အရင်း ကို ပစ်ထားတယ်ဆို တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ အပေါ် ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး – Real Link
မြင့်မြတ် ဟာ ဖခင်အရင်း ကို ပစ်ထားတယ်ဆို တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ အပေါ် ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး
ကျွန်တော် တိတိကျ ကျ သိတာ .ကျွန်တော်နဲ့ တွဲပြီးကူ တာ တွေ အများကြီးရှိပါ တယ် မပြောတော့ဘူး အနီးစပ်ဆုံး Covid First wave က ပြောမယ်ဆို PPE သိန်း ၁၃၀ ကျော်ဖိုး လှူတယ် ဆေးရုံးဝန်ထမ်း တွေ အတွက် ၁၀ သိန်း ကျွန်တော့် အလှူမှာ ထပ် မတည်တယ် မရမ်းကုန်း မြို့နယ် မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် ဆန်ဆီဆား လိုအပ် တာ လှူတယ် ။ ရုပ်ရှင်လောက သားများ အဆင်မပြောဘူး ဆိုလည်း သူကူပါတယ်
မြင့်မြတ်က ဖေ့ဘွတ် မသုံးဘူး နောက်ပြီးတော့ သူ့အဖေ ကို ဘယ် အိမ်ဝယ်ပေးလိုက် တယ် .အမေ ကို ဘယ်ကွန်ဒို ဝယ်ပေးလိုက် တယ် ….။ ညီမလေးတွေ ကို ဘာ ဆိုင်ဖွင့်ပေး လိုက်တယ် ။ သူလူသိ အောင် မပြောပြခဲ့ဖူးလေ
အဲ့လို ပြော လို့ အဖေ အမေကို အိမ်ဝယ်ပေးပြီး Fb ပေါ်ပီတိ အဖြစ်နဲ့ တင်တဲ့ သူများကိုလည်း စော်ကားချင်း မဟုတ်ပါ .ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကြည့်ပြီး အဲ့လို Post တိုင်း ကို ကြည်နူးမိ ပါတယ်။
Excel မှာ အခန်းဝယ် ပေးတယ် ရွှေဂုံတိုင် မှာ ကွန်ဒိုဝယ်ပေးတယ် .ဦး အတွက် Crown ဝယ်ပေး တယ် ညီမလေး တွေ အတွက် လုပ်ချင် တဲ့ အလုပ်လေး တွေသူလုပ်ပေးတယ် ရင်းနီးပေးတယ်။ လတိုင်း မိသားစု ကို ကန်တော့ တာ စိတ်ထဲ က မှန်းကြည့်ဘယ်လောက် ဖြစ်နိုင်မလဲ မှန်းကြည့်တာ ထက် ၃ ဆ လောက်များပါတယ်။
လူတိုင်း မှာ အခက်ခဲ နဲ့ ယှဉ်ဆိုင်နေ ရသလို Covid အချိန်ကာလ မှာ သူလည်း အခက်ခဲပေါင်းများ စွာ ရှိပါတယ် . စိတ်ညစ်စ ရာ များစွာရှိပါတယ် .အဲ့ဒါကြောင့် အရင် Live မ လွှင့် Fb မသုံးတဲ့ လူ စိတ်ထွက် ပေါက် အနေနဲ့ သူ သီချင်းတွေ အော် ဆိုတယ် ကပြတယ် အလွတ် ပျော်ပျော်နေတယ် ပရိတ်သတ် လည်း ပျော်တယ် သူလည်း ပျော်တယ် Live မှာ တွေ့ရတာ လည်းဒါသူ ဘဝ ပုံစံ ပဲ . အထာ မရှိဘူး ပေါ့ပါးတယ် အနုပညာ အရည်ချင်း ခမ်းနားတယ် နေတာ ထိုင်တာ မခမ်းနား ဘူး ညပ်ဖိနပ် နဲ့ ဘောင်းဘီတိုပဲ ဒါပဲလေ ။
သူ့စီမှာ လည်း စိတ်ရူပ်စ ရာတွေ အရမ်းများပါတယ် .သူ လူတိုင်းကို မပြောတတ် ဘူး ကျွန်တော်ပြော လည်း စိတ်ညစ်တာပဲ ရှိမှာပါ ဆိုပြီး သူပြောနေကျစကား (အချိန်တန်ရင် သူဟာသူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်) ပြောပြီး အမြဲတန်း ရီ အဲ့ဒါကြောင့် သူဖုန်းပိတ်ထားတာ များပါတယ် ဘယ်မှလည်း မသွားဘူး . အိမ်မှာပဲ ရှိပါတယ်
ကျွန်တော် တို့ တွေ့ချင်လည်း အိမ်ပဲသွား တာ အရေးကြီးတဲ့ အချိန် ဆက်မယ် ဆိုလည်း ဘယ်သူဆက် ဆက် Manager နဲ့ သူ့ဘေးနားရှိ တဲ့ ညီလေးစီဆက်ရင် မြင့်မြတ် ကိုယ်တိုင် မကိုင်တာ မှ မရှိတာ ဦး တက္ကဆီ မောင်းတာ လည်း ကားဝယ်ထဲ က နံပတ် အနီဝယ်တာ အလုပ်မရှိ ရင် ပျင်းလို့ ဒီ တိုင်း မောင်းနေတာ ကျွန်တော့် ကို ဦး ကိုယ်တိုင်ပြောဖူး ပါတယ်
မိသားစု တွေ နားလည်မူ့ ခဏ လွှဲတယ်လို့ ပဲမြင်ပါတယ် သင်ခန်းစာ လေး တစ်ခု က တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Media ကို သွားမဖြေရှင်း ဖို့ပါပဲ .မြင့်မြတ် အဖေ ကို အကူညီ တောင်းခံတဲ့ လူအသွင် ဖြစ်အောင် . နောက်ခံတီး လုံးတွေ Edit တွေ နဲ့ Drama ခင်းထားတော့ မြင့်မြတ် ကိုပိုပြီး အထင်ဝိုင်း ဆောင်းကျ တဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် .(အကူညီ တောင်းခံ တဲ့ လူတန်းစားများ ကို လည်း စော်ကားချင်း မဟုတ်ပါ)
ထင်ရာတွေ ဝေဖန်နေ တဲ့ လူများကို တော့ထင်သ လို မဟုတ်ပါဖူးလို့ ပဲ အတိကျပြောချင် ပါတယ်ခင်ဗျ .ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ကိစ္စမှ မပါတော့ တာကြာပါပြီ.မြင့်မြတ် ကိစ္စကတော့ ဘာဖြစ် နေနေ ကျွန်တော်တို့ သူ့ဘက် က အပြည့်ဝ ရပ်တည်ပြီးသား ပါ
တကယ်လည်း ကျွန်တော် ပြောတာတွေ အမှန်တရား တွေကြီးပါပဲ .အားလုံး ကျေးဇူးတင် ပါတယ် မြင့်မြတ် က နာမည် နဲ့ လိုက်အောင် မြင့်မြတ် ပါတယ် အားလုံး Peace ‘ ဟု ဆိုကာ ယုန်လေး က သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ တာပါနော်။
Previous post မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ဌာနမှ ဒီဇင်ဘာ(၂၁)ရက်နေ့အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း
Next post အမေရိကန် က ကာကွယ်ဆေး က လူကို မိချောင်းအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင် တယ် လို့ ဘရာဇီး သမ္မတ ပြောကြား